Maamulka Puntland ayaa ku eedeeyey MW Farmaajo mas’uuliyada fashilka shirkii… – Hagaag.com
Maamulka Puntland ayaa ku eedeeyey MW Farmaajo mas’uuliyada fashilka shirkii…
Maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay fashilka ku yimid shirkii wadatashiga ee Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ku yeesheen Magaalada Dhuusamareeb.
Wasiirka Warfaafinta Puntland, Cabdullaahi Cali Xirsi (Timacadde) ayaa sheegay in Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka mas’uul yahay burburka ku yimid shirkaasi.
Wasiirka ayaa tilmaamay in arrinta Gobolka Gedo ay noqotay middii ugu cusleyd ee shirka, taasoo markii dambena leesku fahmi waayay, ka dib markii sida uu yiri uu Madaxweynuhu si gaara isugu dhejiyay.
“Waxa ugu cuslaa oo ugu cuslaatay, markii dambena leesku fahmi waayay waxay noqotay arrinta Gobolka Gedo, oo Madaxweynuhu uu si gaara isugu dhejiyay.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa Madaxda Dowladda Federaalka ku eedeeyay inay dagaal kula jiraan hannaanka federalism-ka, oo dowladnimada dalka ay ku dhisan tahay.
“Madaxda hadda joogta Villa Somalia ee waqtigu ka dhammaanayo waxay la dagaalamayaan nidaamka federalism-ka, waxa la ilaalinayana waa federalism-ka. Waxaa weeye nin walba waxa uu xaqa u leeyahay inuu qaato, xaq aanu lahayn qofna ma qaadan karo.” Ayuu yiri Wasiir Timacadde.
Wasiir Timacadde ayaa intaa ku daray “Madaxweynuhu wuxuu rabaa in Gedo ay noqoto meel isaga siduu doono u maamulo, halkii uu ka ahaa Madaxweynaha Dowladda Somalia. Marka dadka walaalaha ah ee halkaa wada degan ee ka tirsan Jubbaland si gaara inuusan u fara-gelin Madaxweynuhu, Soomaali oo dhan bay ceeb ku tahay, Madaxweynahana uma wanaagsana.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa Sabtidii Maamulada Puntland iyo Jubbaland ku eedeeyay kuwa caqabadda ku noqday wadahadaladii xalka loogu raadinayay arrimaha doorashooyinka ee dalka, mar uu hortagay Xildhibaanada Golaha Shacabka.